Oppo F11 Pro Avengers Edition, mbipụta ole na ole maka ndị na-akwado ihe nkiri | Gam akporosis
Ndị na-akwụ ụgwọ nwere ekwentị nke ha, ya na Oppo F11 Pro Avengers Edition
Ihe nkiri kacha mma, nke kachasị ukwuu na nke kachasị egwu na-aga ịkụ ihe nkiri gburugburu ụwa na, tupu nke ahụ emee, Oppo ekwuputala obere mbipụta F11Pro nwere akara ngosi mara mma nke otu a. Kedu fim anyị na-ekwu? Ọfọn, site na ndị ọbọ: Endgame ', n'ezie!
Ngwaọrụ ahụ na-ejigide njirimara ya na nkọwapụta ya, ma eziokwu ahụ bụ na ọ na-abịa na isiokwu nke ndị ọbọ ga-ezu karịa iji dọta uche nke ihe karịrị otu n'ji onye na-adịghị ọbụna gbalịrị ika, niile iji nweta mobile na-eche dị ka Infinity Gauntlet ya bara nnukwu uru.
1 Oppo F11 Pro Avengers Edition, mobile nke ga-alụ ọgụ megide Thanos
1.1 Nkọwa na Atụmatụ
Oppo F11 Pro Avengers Edition, mobile nke ga-alụ ọgụ megide Thanos
Oppo F11 Pro Avengers Edition igbe dị n'ime ya
Mwepụta nke ekwentị na-abọ ọbọ na-ebili site na mkpakọrịta nke ụlọ ọrụ China na Marvel Studios rụrụ. Ekwentị so na nkwalite nke ụlọ ọrụ ihe nkiri na-eme iji kwalite mmasị na fim ahụ.
Maka ugbu a Oppo F11 Pro Avengers Edition dị na Malaysia maka iwu. Agbanyeghị, ọ ga-akụkwa ahịa ndị ọzọ n'oge adịghị anya, dịka India, ebe ọ ga-efedata dị ka Thor, Chukwu nwe igwe egbe, na Eprel 26, nke bụ echi. N'ebe ahụ, ọ ga-adị maka ịzụta naanị site na Amazon.in.
Followinggbaso ụkpụrụ nke ndị ọbọ ọbọ, mobile na-abịa na-acha anụnụ anụnụ ụda na kenkowaputa imecha. Ọ na atụmatụ ndị Asia mbinye aka grajentị mmetụta jikọtara ya na mgbagwoju anya hexagonal ụkpụrụ na-acha uhie uhie nkiri logo.
Ọ na-abịa na a Captain America sitere n'ike mmụọ nsọ pensụl na-eyi ọda akara ngosi ya, maka nchebe na ntachi obi agbakwunyere. Enwere ike iji ngwa a dị ka ihe njide maka ekwentị, ma ọ bụ iji jide ya ma ọ bụ tinye ya n 'ihu igwe iji lelee vidiyo ma ọ bụ ịnyagharịa n'ụzọ dị nro.
Iji nyekwuo nsogbu ahụ, igbe igbe nke mbipụta pụrụ iche nke ngwaọrụ nwere kpochapụla Avengers logo a na-ekpo ọkụ na akara nchịkọta nke onye nchịkọta.
N'ikpeazụ, ọnụ -abịa na 128 GB nke nchekwa dị n'ime ma ọnụ ya dị na ringitts Malaysia 1,399 (~ 303 euro). Ọ dị ugbu a maka ịtọ n'usoro, dị ka anyị nwere ike ịhụ nke ọma, na weebụsaịtị Oppo na ụlọ ahịa ahụ siri ike na Malaysia. Agbanyeghị na ọ gaghị abụ rue Mee 3 ka ọ na-aga ire ere n'ụzọ doro anya.
Nkọwa na Atụmatụ
Ewezuga mgbanwe metụtara atụmatụ nke F11 Pro, ihe ọ bụla ọzọ, na usoro nke ụdịdị, na-anọgide n'otu, dị ka anyị kwurula. N'otu ụzọ ahụ, anyị na-achikota ya ọzọ.
Cheta na ufọt ufọt nwere a 6.5-inch diagonal FullHD + ngosipụta ngosipụta na-enye mkpebi nke pikselụ 2,340 x 1,080, a tara amị 19: 9 akụkụ ruru na 90.9% ihuenyo-to-ahụ ruru, na-eme ka ọ dị nnọọ mma na aka, n'agbanyeghị nha ya. Kama ịbụ ọkwa, ọ na-abịa na igwefoto nwere ike iweghachite nke nwere ihe mmetụta n'ihu igwefoto, nke bụ 16 MP ma gosipụta oghere gbasara f / 2.0.
N'okpuru hundu, ngwaọrụ a kwadoro site na MediaTek na-ewu ewu n'etiti-nso chipset, na Helio P70, ma gosiputa ya Hyper agbam ume technology, nke n’eme ka igwe rụọ ọrụ dị elu na –eme ka ọrụ onye ọrụ dị nro na karị.
Mgbe anyị rutere ngalaba igwefoto, anyị sụrụ ngọngọ n'elu ntọala igwefoto abụọ dị n'azụ nwere a Ihe isi ihe ngosi 48 MP na ihe mmetụta 5 MP nke abụọ yana ihe ọkụ ọkụyana Ọnọdụ Ultra Night iji weghara foto ndị ka mma na ọnọdụ ọkụ dị ala na ụfọdụ ọrụ ndị ọzọ AI.
Nhọrọ njikọta na ngwaọrụ ahụ gụnyere nkwado Dual 4G VoLTE, band 802.11 ac WiFi (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, na ọdụ ụgbọ mmiri microUSB. Banyere ngwanrọ ahụ, Oppo F11 Pro Avengers Edition kwa Ọ na-arụ ọrụ na A gam akporo 9 achịcha dabere na ColorOS 6. Na mgbakwunye na nke a, a kwadebere ya na onye na-agụ akara mkpịsị aka azụ ma jiri batrị 4,000 mAh na-akwado ya nke na-abịa na teknụzụ ngwa ngwa ngwa ngwa nke VOOC 3.0.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ndị na-akwụ ụgwọ nwere ekwentị nke ha, ya na Oppo F11 Pro Avengers Edition
More banyere Redmi na Snapdragon 855: ekpughere nkọwapụta
N'ihi nke a, agbajiri ihuenyo nke Galaxy Fold, dị ka iFixit